रोटा भाइरसविरुद्धको खोप वैशाखदेखि सुरु गर्ने तयारी, अब १२ रोगविरुद्ध नियमित खोप – Health Post Nepal
रोटा भाइरसविरुद्धको खोप वैशाखदेखि सुरु गर्ने तयारी, अब १२ रोगविरुद्ध नियमित खोप
२०७६ पुष २ गते १५:१६
सरकारले आगामी वैशाखदेखि रोटा भाइरसविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नियमित रूपमा ११ वटा रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप दिइँदै आएकोमा अब रोटा भाइरसविरुद्धको खोप थप गर्न लागेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिए । ‘रोटा भाइरसविरुद्धको खोप आगामी वैशाख, जेठबाटै सुरु गर्छौं,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छ ।’ रोटा भाइरसविरुद्धको खोप १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई दिइन्छ ।
नेपाल सरकार र गाभी (ग्लोबल अलाएन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन) संस्थाको सहयोगमार्फत रोटा भाइरसविरुद्धको खोप नियमित खोपमार्फत उपलब्ध गराउन लागेको डा. गौतम बताउँछन् । रोटा भाइरसबाट हुने पखालाबाट बचाउन रोटा खोप दिनुपर्ने र अन्य कारणबाट हुने पखालाबाट बचाउन बाल पोषणमा सुधार गर्नुपर्ने डा. गौतमको भनाइ छ । विश्वमा खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूबाट हुने मृत्युमध्ये ३० प्रतिशत मृत्यु रोटा भाइरसको संक्रमणबाट हुने गरेको छ । त्यसैगरी, पखालाको कारणबाट हुने कुल मृत्युमध्ये करिब ३५ प्रतिशत मृत्यु रोटा भाइरसको संक्रमणका कारण हुने गरेको छ ।
नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये करिब ५० प्रतिशतलाई पखाला हुने गरेको र पखाला लागेकामध्ये करिब ३० प्रतिशतमा रोटा भाइरसको संक्रमण हुने गरेको डा. गौतमले जानकारी दिए । ‘रोटाको संक्रमण कारण ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा धेरै हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमित भएमा यो रोगले धेरै असर गर्छ ।’
सरकारले क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बि, हेमोफिलस इन्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया र जापानिज इन्सेफलाइटिस) बिरुद्द को खोप तथा गर्भवती महिलाहरुका लागि टी.डी.खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
रोटा भाइरस जाडो मौसममा बढी सक्रिय हुन्छ । चिसो बढेपछि बालबालिका यो प्राणघातक भाइरस संक्रमणको जोखिममा पर्छन् । ‘रोटा भाइरसले खासगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा बढी समस्या निम्त्याएको देखिन्छ भने १ वर्षमुनिका बालबालिकामा यो भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च सम्भावना हुन्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘बालबालिकाको मृत्युको कारण निमोनियापछि झाडापखाला हुने गर्छ ।’
रोटा भाइरस सरसफाइले मात्र रोक्न वा नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिने जानकारहरूको भनाइ छ । यो सरुवारोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै र छिटो सर्ने गर्छ । रोटा भाइरस संक्रमितको दिसामा यो भाइरस अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ । यदि त्यो दिसा कुनै मध्यमबाट मुखमा पुगेमा त्यो व्यक्तिमा पनि संक्रमण हुन्छ । संक्रमितको हात, संक्रमित सामान, संक्रमित बालबालिकाले प्रयोग गरेको खेलौना, संक्रमित पानी तथा खानेकुरालगायत रोटा भाइरस सर्ने प्रमुख मध्यम हुन् ।
तारन्तार पानीजस्तो पातलो दिसा लाग्नु, बान्ता हुनु, पेट दुख्नु, अति जलवियोजन हुनु रोटा भाइरस संक्रमणका प्रमुख लक्षण हुन् । त्यसैगरी, मन्द गतिको ज्वरो आउनु, बालबालिकाले झिँझिने स्वाभाव देखाउनु, पेट दुखेर रुनु, खानमा अरुचि हुनुजस्ता लक्षण देखापर्छन् ।
सामान्य लक्षणसँगै बच्चाको आँखा गड्यो भने, पेटमा मुजा पर्यो भने, खाएपछि बान्ता गर्यो वा बेहोस भयो भने यसलाई जटिल वा खतरनाक अवस्था मानिन्छ । यस्ता लक्षण देखिनासाथ यथाशीघ्र अस्पताल लैजान चिकित्सकको सुझाब छ ।
सतर्कता कसरी अपनाउने ?
– हात धोएर मात्र बच्चालाई खाना खुवाउने,
– बच्चा र बच्चा बस्ने वातावरण सफा राख्ने,
– रोटा भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने,
– पानी उमालेर मात्र पानी पिलाउने ।